အခြားဝန်ဆောင်မှု YANDEX.MAIL မှဖုန်းခေါ်ဆိုမှု FORWARDING ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ - YANDEX - 2019
Yandex.Mail အပေါ် forwarding ကိုတက်ချိန်ညှိခြင်း
XLSX နှင့် XLS ekselevskimi spreadsheet ကို formats ဖြစ်ကြသည်။ ထောက်ခံမှု၎င်း၏အစီအစဉ်အားလုံးရှုထောင့်ကိုပထမဦးဆုံးတဦးတည်းအများကြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဒုတိယထက်ဖန်တီးခဲ့ကြောင်းပေးထားလျက်နှင့်မ, XLS မှ XLSX ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေလည်းမရှိ။
XLS ပြောင်းလဲခြင်းမှ XLSX အားလုံးသည်နည်းလမ်းများသုံးအုပ်စုများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်:
အွန်လိုင်း converters အဖြစ်;
Program ကို-converters ။
Method ကို 1: အသုတ်လိုက် XLS နှင့် XLSX Converter
အဆိုပါ shareware converter ကိုအသုတ်လိုက် XLS နှင့် XLSX ထံမှ XLS ဖို့ကဲ့သို့၎င်း, ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ပြောင်းလဲရာ XLSX Converter, အသုံးပြု. algorithm ကို၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဖော်ပြခြင်းဖြင့်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားစတင်ဖို့ရန်။
အသုတ်လိုက် XLS နှင့် XLSX Converter Download
converter ကို run လိုက်ပါ။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဖိုင်များ" ၏လက်ျာဘက် "ရင်းမြစ်".
ဒါမှမဟုတ် icon ကို click "ပွင့်လင်း" ဖိုင်တွဲ၏ပုံစံ။
spreadsheet ရွေးချယ်ရေး window ကို run ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်မှာအရင်းအမြစ် XLSX directory ကိုသွားပါ။ သင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြတင်းပေါက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင် "ပွင့်လင်း"ဖိုင်ရွှေ့ဖို့သေချာပါစေ switch ကိုရာထူး၏လယ်ပြင် formats "အသုတ်လိုက် XLS နှင့် XLSX စီမံကိန်း" အနေအထား "Excel ကိုဖိုင်မှတ်တမ်း", ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လိုချင်သောအရာဝတ္တုရိုးရှင်းစွာ window တွင်ပြသသည်မဟုတ်။ ဒါကြောင့်ကို Select လုပ်ပါနှင့်စာနယ်ဇင်း "ပွင့်လင်း"။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်သင်, မျိုးစုံဖိုင်တွေရွေးနိုင်သည်။
အခြေခံ converter box ထဲမှာတစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီရှိပါသည်။ ရွေးချယ်ထားသောဖိုင်များကိုလမ်းကြောင်းကိုဒြပ်စင်၏ပြောင်းလဲခြင်းအဘို့ပြင်ဆင်သောစာရင်းထဲတွင်ပါသို့မဟုတ်လယ်ပြင်၌ပြသသွားမည် "ရင်းမြစ်"။ လယ်ပြင်၌ "ပစ်မှတ်" အထွက်စားပွဲပေါ်မှာ XLS လှေတျတျောမူပါလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်တစ်ဖိုင်တွဲဖေါ်ပြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီအရင်းအမြစ်သိုလှောင်သောတူညီသောဖိုင်တွဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် user က directory ၏လိပ်စာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "folder" ၏လက်ျာဘက် "ပစ်မှတ်".
နည်းလမ်းဖွင့်လှစ် "Folder ကိုများအတွက် Browse"။ သင်အထွက် XLS သိမ်းထားဖို့လိုတဲ့နေရာကိုလမ်းညွှန်ဖို့ကရွှေ့ပါ။ က Select လုပ်ပါ, စာနယ်ဇင်း "အိုကေ".
အဆိုပါ converter box ထဲမှာ "ပစ်မှတ်" ရွေးချယ်ထားသောထွက်စာ၏လိပ်စာဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတွင်သင်သည်ပြောင်းလဲခြင်းစတင်နိုင်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပြောင်း".
ကူးပြောင်းခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆန္ဒရှိပါကအသီးသီးခလုတ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ကြားဖြတ်သို့မဟုတ်ခေတ္တနားပေါ်တွင်တင်နိုင်ပါသည် "Stop" သို့မဟုတ် "ဆိုင်းငံ့".
တိုးချဲ့မှု XLS နှင့်အတူပြောင်းလဲအရာဝတ္ထု၏တည်နေရာကိုသွားစေရန်, mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုအတူစာရင်းထဲတွင်သက်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထု၏နာမကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ drop-down list ကိုကလစ်အတွက် "View Output".
စတင် "Explorer ကို" ဖိုင်တွဲထဲမှာရှိရာကိုရွေးချယ်စားပွဲ XLS ။ အခုဆိုရင်သင်ကမဆိုကိုင်တွယ်စေနိုင်သည်။
အဓိက "အနုတ်" နည်းလမ်းကြောင်းအသုတ်လိုက် XLS နှင့် XLSX Converter တစ်ဦးပေးဆောင်အစီအစဉ်န့်အသတ်များစွာရှိပါတယ်ရာ၏အခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။
Method ကို 2: LibreOffice
ထို့အပြင် Calc ဖြစ်ပါသည်တဦးတည်းသော processors ကိုစားပွဲပေါ်မှာတစ်အရေအတွက်နိုင်ပါတယ် XLS မှ XLSX convert, LibreOffice အထုပ်များတွင်ပါဝင်သည်။
စတင် shell ကို LibreOffice ကိုသက်ဝင်။ စာနယ်ဇင်းများ "ပွင့်လင်းဖိုင်မှတ်တမ်း".
သင်တို့သည်လည်းသုံးနိုငျ ကို Ctrl + အို သို့မဟုတ် Menu ပစ္စည်းများကိုသွား "File" နှင့် "ပွင့်လင်း ... ".
ပြေးစားပွဲ၏အဖွင့်ကိုဆိုလိုပါတယ်။ စက်ရုံ XLSX တည်ရှိရာသို့သွားရန်။ က Select လုပ်ပါ, စာနယ်ဇင်း "ပွင့်လင်း".
ဖွင့်ပွဲနှင့်သွားတာဝင်းဒိုးကိုဖျော်ဖြေဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေက "ပွင့်လင်း"။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၏ XLSX တင်းကျပ် "Explorer ကို" အဆိုပါ စတင်. shell ကို LibreOffice ။
စားပွဲပေါ်မှာ Calc interface ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ယခုငါတို့ XLS ကပြောင်းဖို့လိုသည်။ တစ်ဦး floppy disk ကို၏ပုံစံအတွက်ပုံရိပ်၏ညာဘက်တစ်တြိဂံ၏ပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာ icon ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ရှေးခယျြ "Save As ကို ... ".
သင်တို့သည်လည်းသုံးနိုငျ Ctrl + Shift + S ကို သို့မဟုတ် Menu ပစ္စည်းများကိုသွား "File" နှင့် "Save As ကို ... ".
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ဝင်းဒိုးကိုပုံပေါ်ပါတယ်။ ဖိုင်ကိုသိမ်းဆည်းထားအဲဒီမှာရွှေ့ဖို့တည်နေရာတစ်ခုရွေးချယ်ပါ။ ထိုဒေသတွင် "File အမျိုးအစား" စာရင်းထဲက, select လုပ်ပါ "- 2003 Microsoft Excel 97"။ စာနယ်ဇင်းများ "Save".
ဒါက window ကိုပုံစံအတည်ပြုချက်ကိုဖွင့်လှစ်။ ဒါဟာသင်အမှန်တကယ်မဟုတ်ဘဲလွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲရုံး Calc အတွက် "ဇာတိ" ဖြစ်သည့် ODF အတွက်ထက်, XLS format နဲ့စားပွဲတစ်ခုကိုကယ်တင်ချင်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာကိုလည်းအစီအစဉ်ကိုသူမ၏ဖိုင်အမျိုးအစားရန် "နိုင်ငံခြား" တွင်တချို့ပြင်ဆင်ထားသောအရာများ element တွေကိုကယ်တင်နိုင်မကျမည်အကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်။ မကြာခဏပုံစံအချို့ဒြပ်စင်မှန်ကန်စွာထိန်းသိမ်းထားအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေလျှင်ပင်, တက table ၏အထွေထွေပုံစံပေါ်တွင်အနည်းငယ်သက်ရောက်မှုကြောင့်ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့။ ထို့ကြောင့်စာနယ်ဇင်း "- 2003 မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Excel ကို 97 format ကိုသုံးပါ".
စားပွဲတင် XLS သို့အသွင်ပြောင်း။ သူမသည်သူ့ကိုယ်သူချွေတာသည့်အခါအသုံးပြုသူဟုမေးကြောင်းတည်နေရာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့လိမ့်မည်။
ယခင်နည်းလမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဓိက "အနုတ်လက္ခဏာ" ကတစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားစီ spreadsheet ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါသည်အဖြစ် spreadsheet အယ်ဒီတာ အသုံးပြု. တစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကူးပြောင်းထုတ်လုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, LibreOffice ကြောင်းလိမ့်မည်ခြောသိသာ "အပေါင်း" အစီအစဉ်တွင်တစ်ဦးလုံးဝအခမဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
Method ကို 3: OpenOffice
သငျသညျ XLS ဖို့ spreadsheet XLSX reformat နိုင်သည့်နှင့်အတူနောက်တစ်နေ့စားပွဲပေါ်မှာအယ်ဒီတာ, OpenOffice Calc ဖြစ်ပါတယ်။
ကနဦးမျက်နှာပြင် Oupen ရုံးစတင်ပါ။ စာနယ်ဇင်းများ "ပွင့်လင်း".
မီနူးသုံးစွဲဖို့ပိုနှစ်သက်သူကိုအသုံးပြုသူများအများအတွက်, သငျသညျ sequential ဖိရမှတ်ကိုသုံးနိုင်သည် "File" နှင့် "ပွင့်လင်း"။ ကို "ပူသော့" option ကိုအသုံးပြုလိုသူများအတွက်သုံးစွဲဖို့အဆိုပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် ကို Ctrl + အို.
အရာဝတ္ထုရွေးချယ်ရေးဝင်းဒိုးကိုပုံပေါ်ပါတယ်။ ထားရှိဘယ်မှာ XLSX သို့သွားရန်။ စာရင်းဇယားဖိုင်, စာနယ်ဇင်းမီးမောင်းထိုးပြ "ပွင့်လင်း".
ယခင်နည်းလမ်း၌ရှိသကဲ့သို့, သင်ကနေဆွဲအားဖြင့်ဖိုင်တစ်ခုဖွင့်နိုင်သည် "Explorer ကို" program ကိုအခွံပါ။
အကြောင်းအရာ OpenOffice Calc အတွက်ဖွင့်လှစ်။
လက်ျာ format နဲ့ဒေတာ save လုပ်ဖို့, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "File" နှင့် "Save As ကို ... "။ လြှောကျလှာ Ctrl + Shift + S ကို ဤနေရာတွင်လွန်းသောကြောင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
တစ်ဦးကိုကယ်တင်စတင်သည်။ တစ်ဦး reformatted စားပွဲပေါ်မှာနေရာစီစဉ်ထားရှိရာကရွှေ့ပါ။ လယ်ပြင်၌ "File အမျိုးအစား" တန်ဖိုးစာရင်းထဲကရှေးခယျြ "Microsoft က Excel ကို 97/2000 / XP ကို" နှင့်စာနယ်ဇင်း "Save".
ဒါကကျနော်တို့ LibreOffice မြင်သောအမျိုးအစားတူ၏ XLS အတွက်ချွေတာသည့်အခါပုံစံချပေး၏ဒြပ်စင်အချို့ကိုဆုံးရှုံးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်. သတိပေးအတူ window ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာတွင်နှိပ်ဖို့ရှိသည် "လက်ရှိပုံစံကိုသုံးပါ".
စားပွဲပေါ်မှာ XLS ပုံစံထဲမှာသိမ်းထားတဲ့နှင့် disk ပေါ်မှာယခင်ကသတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင်ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။
Method ကို 4: Excel ကို
ဟုတ်ပါတယ်, XLS မှ XLSX convert ဤပုံစံများနှစ်ခုစလုံး "မိသားစု" နေသောအဘို့အနိုင် Excel ကို spreadsheet ။
အရာဝတ္ထုရွေးချယ်ရေး window ကို run ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ကိုစားပွဲပေါ်မှာ XLSX format နဲ့တည်ရှိရာသို့သွားရန်။ က Select လုပ်ပါ, စာနယ်ဇင်း "ပွင့်လင်း".
စားပွဲပေါ်မှာ Excel ကိုဖွင့်လှစ်။ အခြား format နဲ့သိမ်းပါရန်, အပိုင်းပြန်သွား "File".
အခုတော့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Save As ကို".
ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အားဖွငျ့ activated ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ပြောင်းလဲစားပွဲပေါ်မှာဆံ့ဖို့ဘယ်မှာမှသွားလာရန်။ ထိုဒေသတွင် "File အမျိုးအစား" စာရင်းထဲက select လုပ်ပါ "Excel ကို 97 ၏စာအုပ် - 2003"။ ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Save".
ဒါဟာဖြစ်နိုင် compatibility ကိစ္စများ၏သတိပေးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကိုပြီးသားအကျွမ်းတဝင်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်ပေမယ့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကြည့်ရှိပါတယ်။ စ SNAP "Continue".
ဒါပေမယ့်လုပ်ဆောင်ချက်ထိုကဲ့သို့သောသင်တန်းသာ Excel ကို 2007 ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်ဗားရှင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ built-in tools တွေကိုဒီအစီအစဉ်၏အစောပိုင်းကဗားရှင်းသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှု၏အချိန်မှာဒီ format နဲ့မတည်ရှိခဲ့ဘူးရိုးရှင်းစွာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် XLSX ဖွင့်လို့မရပါဘူး။ သို့သော်ဤပြဿနာကို solvable ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက download, လိုအပ်ပြီးတရားဝင်မိုက်ကရိုဆော့ဖက်ဘ်ဆိုက်ကနေလိုက်ဖက်တဲ့ pack ကို install လုပ်ပါ။
အဆိုပါအသုံးပြုပုံများ Pack ကို Download လုပ်ပါ
ထို့နောက် XLSX spreadsheet Excel ကို 2003 ခုနှစ်နှင့်ပုံမှန်အတိုင်းအစောပိုင်း version အတွက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ တိုးချဲ့မှုနှင့်အတူဖိုင်ကို Run, အသုံးပြုသူ XLS ထဲမှာ reformat နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ရိုးရိုးမီနူးမှတဆင့်လမ်းညွှန် "File" နှင့် "Save As ကို ... "ပြီးတော့ပြတင်းပေါက်၌တည်နေရာနဲ့ format ကို type ကို Save the လိုချင်သောကိုရွေးပါ။
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ XLS မှ XLSX convert, သင် converter ကိုပရိုဂရမ်သို့မဟုတ် spreadsheet ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်တစ်ဦးကြီးမားသောအသွင်ပြောင်းဖို့လိုတဲ့အခါမှာ converters အကောင်းဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာ, ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များ၏အများစုမှာပေးဆောင်နေကြပါတယ်။ ဒီဧရိယာအတွင်းရှိယူနစ်ပြောင်းအတော်လေးလွဲအခမဲ့ tabular processors ကိုအထုပ် LibreOffice နဲ့ OpenOffice များတွင်ပါဝင်သည်။ အများစုမှာဘာသာပြောင်းဒီစာရင်းဇယားကတည်းကနှစ်ဦးစလုံးကို formats "မိသားစု" ဖြစ်ကြသည်မှန်ကန်စွာ Microsoft က Excel ကိုဖျော်ဖြေနေကြသည်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာ, ဒီကြေး-based ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: Why Is Google Struggling In Russia? Yandex (နိုဝင်ဘာလ 2019).